Nhanganyaya kune Statistics naR
Kosi iyi inodzidzisa manhamba vachishandisa iyo software yemahara R.
Kushandiswa kwemasvomhu kushoma. Chinangwa ndechekuziva maitiro ekuongorora data, kunzwisisa zvauri kuita, uye kukwanisa kutaura zvaunenge wawana.
Ichi chidzidzo chakanangana nevadzidzi nevarapi vezvidzidzo zvese vanotsvaga mawoko pakudzidziswa. Zvichabatsira kune chero munhu anoda kuongorora dhatabheti chaiyo sechikamu chekudzidzisa, nyanzvi kana basa rekutsvagisa, kana nekuda kwekuda kuongorora dhatabheti vari voga (data web, data yeruzhinji, nezvimwewo).
Kosi yacho inobva pane software yemahara R inova imwe yeakanyanya simba statistical software iripo parizvino.
Nzira dzakafukidzwa ndeidzi: maitiro ekutsanangura, bvunzo, kuongororwa kwekusiyana, mutsara uye logistic regression modhi, censored data (kupona).
Nhanganyaya kune Statistics naR January 17th, 2022Tranquillus
VERENGA Kudonhedza: Professional Shopify chitoro chisikwa
pashureShandisa CCI zvakanaka mune email
zvinoteveraKusiya kupihwa kuvabereki vevana vanokura mamwe zvirwere zvisingaperi kana kenza
05| Ndeapi matemo nemamiriro ekutora basa rehunyanzvi shanduko mapurojekiti?
Mahara: Kugadzirwa kweMulti-sosi TCD, gadzira zvikamu uye nhambo yenguva
Chikamu chekuita: 100% kufukidza mumadhipatimendi akabatwa nehutano hwezvirambidzo
Biomass uye Green Chemistry